Qiimeynno - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Cabbiraadda sida wanaagsan ee ardaydeenu wax u baranayaan
Macalimiintu waxay isticmaalaan qiimeyn kala duwan sanad dugsiyeedka oo dhan si ay uga caawiyaan fahamka sida caruurtu wax u baranayaan. Qaarkood waa kuwo aan rasmi ahayn oo waxay siiyaan macallimiinta sawir deg deg ah oo ku saabsan sida wanaagsan ee ardaygu u bartay xirfad gaar ah. Kuwa kale - sida imtixaanada dowladdu amartay - waa kuwa rasmi ah waxayna bixiyaan aragti guud oo aqoon ah.
Adeegsiga macluumaadka ka imanaya qiimaynta aan rasmiga ahayn iyo tan rasmiga ahba, macallimiinteennu waxay si fiican u fahmi karaan baahida ardayda oo waxay siin karaan qalabka ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan.
Isuduwaha Qiimaynta Barashada & Hal-abuurka
Ma jeceshahay sida ardaydeenu wax u wadaan?
hubi Kaarka Warbixinta ee Gobolka ee Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Biyaha
Cusbooneysiinta Qiimeynta Gobolka oo dhan 2020-2021
Laga bilaabo 2/22/21, dowladda federaalka ayaa warqad u dirtay dhammaan waaxaha waxbarashada gobolka iyagoo kula talinaya in imtixaanka gobolka oo dhan (MCA, MTAS, iyo ACCESS) looga baahan yahay sanad dugsiyeedka 2020-2021. Waaxda Waxbarshada ee Minnesota (MDE) iyo hay'adaha kale ee dawlada ayaa hada dib u eegis ku samaynaya shuruudaha dawlada dhexe isla markaana la wadaagi doona hanuunin degmo dugsiyeedyada sida ugu dhakhsaha badan. Dhanka kale, Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay si taxaddar leh ugu diyaargaroobayaan dhammaan fursadaha iyo qorshooyinka si ay ula xiriiraan qorshooyin qiimayn gaar ah ee gobolkayaga dugsigeenna boggaan iyo / ama iyada oo loo marayo isgaarsiinta shaqsiyeed ee dugsiga. Waxaan kaa codsaneynaa dulqaadkaaga inta aan ka sugeyno tilmaam dheeraad ah MDE. Isla marka aan helno macluumaad dheeri ah, waan idinla wadaagi doonnaa. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga!
Bilow - Dhammaad
Kalandarka Qiimaynta Degmooyinka 2020-2021
Ujeeddada Adeegsiga ee 2020-2021
Ma jiraan dhacdooyin la soo bandhigo
Qiimaynta Dugsiga Dhexe
Qiimeynta Dugsiga Sare
ACCESS iyo Beddelka ACCESS ee loogu talagalay Barteyaasha Luqadda Ingiriisiga
Xannaanada : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge
Fasalka 1 : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge
Fasalka 2 : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge
Fasalka 3 : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge, CoGAT 7, MCA
Fasalka 4 : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge, MCA
Fasalka 5 : Nidaamka Qiimeynta Benchmark (BAS), FastBridge, MCA
Imtixaanka 'CoGAT' waxaa la siiyaa dhammaan ardayda fasalka 3-aad xilli kasta oo dayr ah oo lagu aqoonsado adeegyada Hibada iyo Kartida. Muhiimad ahaan, waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado waxyaabaha ay ku fiican yihiin dhammaan ardayda oo aan had iyo jeer lagu muujin imtixaannada kale ee gaaritaanka. CoGat wuxuu qiimeeyaa awoodaha ardayda ee sababaynta iyo xalinta dhibaatada iyadoo la adeegsanayo astaamo hadal, tiro, iyo hadal aan badnayn (baaxad leh). Dhibcaha waxaa lala wadaaga qoysaska horraanta Diseembar waxaana laga heli karaa Skyward iyo Illuminate.
Natiijooyinka waxaa isla markiiba loo heli karaa macallimiinta Fastbridge iyo Illuminate; Xogta waxaa lala wadaagayaa ardayda iyo qoysaska iyada oo loo marayo bogga Skyward iyo shirarka ka dib daaqada imtixaanka.
Fasalka 6 : MCA, NWEA
Fasalka 7 : MCA, NWEA
Fasalka 8 : MCA, NWEA
MCA-yada waxaa amar ka haysta gobolka Minnesota. Waxay ka caawiyaan dugsiyada iyo degmooyinku inay cabiraan horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee gobolka. Imtixaannada akhriska iyo xisaabta waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasallada 6-8 iyo imtixaanka sayniska waxaa la siiyaa ardayda fasalka 8aad.
Imtixaanada Ururka Northwest Evaluation Association (NWEA) waxay go'aamiyaan heerka waxbarida canugaaga waxayna cabiraan kobaca tacliinta sanadba sanadka ka dambeeya xisaabta iyo aqrinta. Waxay yihiin imtixaanno la-qabsi ah (soo bandhigaya su'aalo aad u dhib badan sida ilmuhu si sax ah ugu jawaabo) oo tilmaamaysa heerka waxbarasho ee arday kasta. Waxaa la siiyaa ardayda fasalada 6-8 deyr kasta iyo guga.
Fasalka 9 : Sayniska MCA (* haddii la qaadanayo Biology ama Life Science)
Fasalka 10 : Akhrinta MCA, Hordhac, PSAT *
Fasalka 11 : Accuplacer *, ACT Plus Qorista, ASVAB *, Xisaabta MCA, PSAT *
Fasalka 12 : Accuplacer *, ASVAB *
Accuplacer waa xisaabta, aqrinta, iyo qorista imtixaanka meeleynta ee kuliyadaha bulshada ee deegaanka, oo ay qaadaan ardayda raba inay codsadaan oo lagu meeleeyo koorsooyinka kulleej gaar ah. Imtixaanka waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasalada 11aad iyo 12aad oo lacag ah, waxaana la qaadaa guga.
Natiijooyinka Accuplacer markiiba ardayda way heli karaan.
Qorista ACT Plus
ACT waxay cabiraysaa kulleejada tacliinta ardayda iyo u diyaarsanaanta xirfadaha dhinacyada Ingiriiska, xisaabta, sayniska, akhriska iyo qorista. Waxaa la siiyaa ardayda ku jirta fasalka 11.
Warbixinta buundooyinka waxaa toos loogu diraa ardayda laga bilaabo ACT 6-8 toddobaadyo imtixaanka ka dib.
AP (Imtixaanka Meelaynta Sare)
Imtixaanada ikhtiyaariga ah waxay ku saleysan yihiin koorsooyinka heer jaamacadeed ee lagu dhigo dugsiga sare. Imtixaanadan waxaa la bixiyaa in ka badan laba toddobaad bisha Maajo. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ardaydu qaataan imtixaanka AP ee la bixiyay bishii Maajo. Ardaydu waa inay iska diiwaangeliyaan imtixaanadan dhammaadka Maarso. Ogeysiisyada imtixaanadan waxaa lagu sameyn doonaa koorsooyinka AP ee lagu bixiyo dugsiga sare. Ardayda qaata imtixaanada AP waxaa laga qaadi doonaa lacag ujro ah oo ay dejisay Guddiga Kulliyadda. Su'aalo kasta oo ku saabsan imtixaanka AP waa in lagu hagaajiyaa dhismaha maamulaha ama shaqaalaha Xarunta Pony.
Adeegyada Hubinta Baytariga Aqoonta Xirfadaha (ASVAB)
ASVAB waa imtixaan meelayn ah oo loogu talagalay adeegga milatariga; 10 hoosaadyo ay ka mid yihiin xisaabta iyo aqris-hoosaadyada iyo sidoo kale imtixaanno kale oo loogu talagalay in lagu wargeliyo qofka imtixaanka qaadaya inay ku habboon yihiin xirfado milatari oo kala duwan. Imtixaanka waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasalada 11aad iyo 12aad oo lacag ah, waxaana la qaadaa guga.
Warbixinta dhibcaha waxaa loo diraa dugsiga 14-30 maalmood ka dib imtixaanka.
Qiimaynta Guud ee Minnesota (MCA)
Fasalada 10: Akhriska
Fasalada 11: Xisaabta
Imtixaanka sayniska waxaa la bixiyaa marka la dhammeeyo koorsada Sayniska Nolosha
PreACT waxay ka caawisaa qiimeynta u diyaarsanaanta ardayga ee ACT. Waxay u ekeysiinaysaa khibrada imtixaanka ACT dhammaan afarta qaybood: Ingiriisiga, xisaabta, akhriska iyo sayniska. Warbixinta waxaa ka mid ah tilmaamayaasha tacliinta iyo xirfadaha labadaba, kuwaas oo loogu talagalay inay bixiyaan xoogagga iyo aagagga horumarinta, iyadoo la siinayo aragti dhammaystiran ee kuleejka iyo u diyaarsanaanta shaqada. Waxaa la siiyaa ardayda ku jirta fasalka 10 deyrta sannad kasta.
Warbixinta dhibcaha waxaa loo diraa dugsiga ugu yaraan hal bil imtixaanka ka dib.
Imtixaanka Aasaasiga ah ee Aqoonta Aqoonta wuxuu cabiraa u diyaarsanaanta akhriska, qorista, iyo luqadda, iyo xisaabta. Waxay kaa caawin kartaa go'aaminta u diyaargarowga imtixaanka SAT waxaana sidoo kale loo isticmaalaa in lagu aqoonsado Aqoonyahannada Qaranka ee Mudnaanta leh. Imtixaanka waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasallada 10aad iyo 11aad iyada oo laga qaadayo lacag.
Warbixinta buundooyinka waxaa toos loogu diraa ardayda Guddiga Kulliyadda 6-8 toddobaad ka dib imtixaanka.
ACCESS for ELLs iyo Alternate ACCESS ee ELLs qiimeynta waxaa loo isticmaalaa in lagu kormeero horumarka bartayaasha Ingriiska sida ay u kobcinayaan xirfadaha luqadeed ee aqriska, qorista, dhageysiga, iyo hadalka.
Dhammaan ardayda af Ingiriisiga wax ku barta (ardayda EL) ee ku jira fasallada K-12 waxaa sannad walba lagu imtixaamaa ACCESS ama Alternate ACCESS (oo loogu talagalay ardayda naafada ah xagga garashada garashada leh) illaa ay ka soo baxayaan shuruudaha looga baxo EL.
Shahaadooyinka & Kaararka Warbixinta
Qiimeynta Dugsiga Hoose
Shahaadada Dugsiga Dhexe
Qalabka Macallimiintu U Adeegsadaan Inay Ku Qiimeeyaan Barashada
Kaarka warbixinta aasaasiga waxaa loo isticmaalaa in lagula xiriiro qoysaska iyadoo la tixgelinayo horumarka ardayga xagga himilooyinka waxbarasho ee degmadeena ee heer kasta oo darajo ah. Kaararka warbixinta waxaa la siiyaa qoysaska laba jeer sanadkii - mar deyrta iyo markale guga.
Kaarka warbixinta waxaa loogu talagalay in lagu ogeysiiyo qoysaska guulaha waxbarasho ee ardayda, meelaha ay u baahan yihiin, iyo fursadaha sii socda ee koritaanka. Waa mid ka mid ah siyaabaha badan ee aan kaagala soo hadalno waxqabadka ilmahaaga iyo horumarka uu ku tallaabsanayo.
Waxay ardayda ka dhigtaa kuwo aad uga warqaba waxa laga filayo iyaga. Ardaydu waxay sifiican u fahmi doonaan horumarkooda tacliimeed ee hadda jira ee laxiriira halka ay ubaahanyihiin inay ahaadaan dhamaadka sanadka.
Waxay awood u siineysaa macalimiinta inay si fiican u fahmaan heerka waxqabadka ardayga ee heerka iyo sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo talaabooyinka waxbarida ee xigta ee horumarka waxbarashada.
Tilmaamayaasha Waxqabadka Tacliinta
Si loo matalo heerarka kala duwan ee waxqabadka uu ilmahaagu muujin doono inta lagu gudajiro nidaamka waxbarashadda, waxaad arki doontaa astaamaha 1, 2, 3 iyo 4. Rajada laga qabo ayaa ah in cunug kasta uu la kulmo ama ka bato heerka fasalka dhamaadka sanadka, kaas oo aad u arki lahayd 3 ama ka badan kaarka warbixintooda. Waxaad arki kartaa qaar ka mid ah 2-yada inta lagu jiro, gaar ahaan inta lagu jiro simistarka koowaad iyo sidoo kale marka fikradaha cusub la soo bandhigayo lana barto, ama sida fikradaha ay u sii adkaadaan. Darajada 1 ayaa tilmaamaysa in ilmahaagu u baahan yahay taageero dheeri ah iyo faragelin si horumar looga gaadho heerka, waanan kula shaqayn doonaa si loo go'aamiyo dariiqa saxda ah ee ka caawinaya isaga / iyadu inay koraan.
Hormarinta Beyond Standard
Horumarka ka baxsan filashooyinka heerka fasalka. Waxay muujisaa heerar garasho oo garasho oo heer sare ah iyo adeegsi aad u adag oo aqoon iyo faham ah oo ku saabsan maadooyinka kale
Buuxiyo rajooyinka heerka fasalka. Waxay muujisaa aqoon adag iyo fahamka xirfadaha iyo fikradaha lagu cabiro halbeegga.
Horumar Ku Socda Heerka
Qancinaya xoogaa filashooyin heer-fasal ah wuxuuna hadda muujinayaa horumarka laga gaaray gaaritaanka heerka.
Wali ma buuxin rajada heerka fasalka. Waxay ubaahantahay taageero dheeri ah si ay usameyso horumar ku filan gaaritaanka heerka.
XASUUSO: Warbixinta ku saleysan heerarka, 3s ayaa loo dabaaldegaa!
Qiimeynta Dugsiga Dhexe ee Barashada
Qiimeyntayada ku saabsan barashada barashada waxay siin doontaa qaab-dhismeedka macallimiinta inay si sax ah ugu soo wargeliyaan guusha tacliinta ardayda iyo qoysaskooda.
1. Ujeedada koowaad ee qiimeynta waa in lala xiriiro horumarka tacliinta iyo hanashada ardayda, qoysaska, loo shaqeeyaha, iyo machadyada dugsiga sare kadib. Ujeeddooyinka dheeraadka ah ee qiimeynta waxaa ka mid ah:
Bixinta macluumaadka ay ardaydu u isticmaali karaan qiimeynta naftooda.
Ururinta macluumaadka ay macallimiintu u adeegsan karaan wax ka beddelka qorshaynta iyo waxbaridda.
2. Macallimiinta isla koorsada heerka fasalka ah waxay u adeegsan doonaan xuduudaha qiimeynta si isku mid ah.
3. Darajooyinka koorsadu waxay ka tarjumayaan heerka guusha uu ardaygu ka gaadhay waxbarashadiisa. In kasta oo arrimaha aan aqoonta ahayn ay yihiin kuwa aad loo qiimeeyo oo inta badan gacan ka geysta ku guuleysiga tacliimeed ee ardayga, haddana waxaa loo soo wargelin doonaa si ka duwan fasalka guusha. Markii lagu mideeyo cabirrada hanashada tacliimeed, arrimaha aan aqoonta ahayn ayaa been ka sheegi kara waxa ardaygu garanayo. Tusaalooyinka soo socda ayaa ah arrimo aan aqoon-cilmiyeed ahayn:
Dabeecad (sida soo xaadiritaanka, akhlaaqda, waqtiga oo la ilaaliyo, sharaf darada tacliimeed, kaqeybgalka fasalka qaarkood, dadaalka)
Shaqada guriga oo ku saleysan keliya dhammaystirka.
Sifooyinka kale ama caadooyinka.
4. Fasalka simistarka koorsada waxaa lagu xisaabin doonaa iyadoo lagu saleynayo isku darka qiimeynta guud iyo tan. Qeexitaannada lagu bixiyay dukumintigan ayaa ah hagaha ugu fiican ee lagu go'aaminayo haddii qiimeyntu ay tahay A cademic P ractice (formative) ama A cademic A chievement (summative).
Isku darka guusha tacliinta iyo buundooyinka barashada tacliinta waxay ku saleysnaan doonaan heerarka gundhigga ah, qallafsanaanta koorsada, iyo / ama heerka fasalka. Xisaabinta soo socota waxay bixiyaan qaab-dhismeedka fasalada 7-9.
Darajooyinka qiimeynta guud ayaa la tirinayaa ugu yaraan 80%.
Fasalka qiimeynta qaabeynta waxaa lagu tirinayaa ugu badnaan 20%.
Waaxaha Individual go'aamin doona waxa qiimaynta ku jira ee A cademic P ractice iyo A qaybaha cademic A chievement.
Koorsooyinka shaqsiyeed waxay u isticmaali doonaan boqolkiiba isku mid ah qayb kasta.
5. Barashada ardayga iyo hanashada tacliimeed waa hawl socota. Qiimaynta qaabeysan iyo mid kooban ayaa si ula kac ah dareere ugu jirta si ay u taageerto barashada ardayda.
Qiimaynta qaab-dhismeedka ayaa la dhammaystiri karaa in ka badan hal jeer si loo muujiyo barashada. Macallimiintu waxaa laga yaabaa inay dib u qabtaan waqtiyada loo qabtay.
Qiimaynta isugeynta waa la dhammaystiri karaa markii labaad. Macallimiintu waxay yeelan doonaan shuruudo waxaana laga yaabaa inay dib u qabtaan waqtiyada loo qabtay.
Dib-u-habeyn / Dib-u-eegis:
Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dib uqaataan qiimeyn kasta oo qaabeysan oo aan si fiican loo baran. Ardaygu wuxuu dib uqaadan karaa qiimaynta qaab dhismeedka inta jeer ee loo baahdo si uu uqabto nuxurka, laakiin dib-u-qaadashada waxay u baahan tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la bixin qiimeynta guud Macallimiintu waxay u baahan doonaan shaqooyin tababar dheeraad ah ka hor intaanay u oggolaan ardayga inuu dib u qaato qiimeynta qaab dhismeedka. Dib-u-qaadashada ma aha qiimeyn isku mid ah, laakiin waa qiimeyn ka duwan oo cabiraysa bartilmaameedyada iyo fikradaha isku barasho ee isku mid ah.
Dib-u-qaadashada qiimeynta guud waa mudnaan la siiyaa ardayda muujiyey hanashada dhammaan shaqooyinka guriga iyo qiimeynta qaabeynta ee horseedda qiimeynta guud. Haddii buuga buundooyinka uu tan muujiyo, ardayga waxaa loo oggolaan doonaa hal fursad oo dheeri ah oo uu dib ugu qaato qiimeynta guud. Macallimiintu waxay u badan tahay inay u baahan doonaan shaqo tababar dheeraad ah ka hor intaanay u oggolaan ardayga inuu dib u qaato qiimaynta guud Ardaygu wuxuu u baahan doonaa inuu bilaabo hawsha dib-u-qaadista oo dhammaystirka dib-u-dhammaystirka ayaa la dhammaystiray ka hor qiimeynta guud ee soo socota.
Tilmaamaha dib-u-eegista guud
Kahor qaadista imtixaanka guud marki uhoreysay, ardaygu waa inuu kudhaliyo 80% ama wax kabadan qiimaynta qaab dhismeedka uhoreeyay natiijada.
Dhammaan tababbarka iyo shaqada guriga ee horseedka ka noqoshada ayaa la dhammaystiri doonaa, loo rogi doonaa oo loo samayn doonaa hab la aqbali karo.
Ardayga ayaa jadwal sameyn doona oo qaadan doona dib-u-soo-koobitaankooda wadarta kahor soo-ururinta soo socota ee lagu bixiyo fasalka.
In kasta oo kuwani yihiin tilmaamaha dugsiga, macallimiintu waxay xaq u leeyihiin inay u adeegsadaan go'aankooda xirfadeed xaaladaha gaarka ah.
* Ma jiri doonaan dib u qaadis la ogolaan doono dhamaadka simistarka ama dhamaadka imtixaanada sanadka *
Si loo xisaabiyo darajooyinka, boqolleyda soo socota ee ku saleysan miisaanka waxaa loo isticmaalaa in lagu meeleeyo buundooyin. Taa baddalkeeda, astaamaha xarfaha ayaa sharrax ka bixinaya heerka waxbarasho ee ardayga.
Macallimiintu waxay wareegi doonaan boqolkiiba ugu dhow marka ardaygu u dhexeeyo darajooyinka.
B + = 89-87
Qayb Buuxiyo Heerarka
C + = 79-77
Ma Buuxinaayo Heerarka
D + = 69-67
Ardayda ayaa mas'uul ka ah waxbarashadooda. Dhammaan ardayda waa inay si firfircoon uga qaybqaataan fahamka nidaamka qiimeynta iyo warbixinta. Ardayda waxaa laga filayaa inay fiiriyaan Xarunta Farriinta (ama Jadwalka) ee toddobaadlaha Skyward, la socdaan horumarkooda tacliimeed si ay ugu aqoonsadaan xooggooda iyo daciifnimadooda mowduuc gaar ah iyo, natiijada, inay raadiyaan caawimaad dheeraad ah.
Ardayda ayaa mas'uul ka ah inay la xiriiraan macallinka ku habboon marka su'aalo ama walaac soo baxaan. Ardaydu waxay ballan la dhigan karaan la-taliyahooda si ay uga caawiyaan tacliinta.
Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa xiriiriye muhiim u ah wada hadalka guriga / dugsiga ee guuleysta ee ku saabsan barashada ardayda.
Waalidiinta waxaa si xoogan loogu dhiirigalinayaa inay xaadiraan Habeenka Xogta Waalidka ee xilliga dayrta, hubi horumarka ardayga ee usbuuca Skyward, hubi Xarunta Farriinta (ama Kalandaarka) ee toddobaadlaha Skyward, iyo jadwalka iyo kaqeybgalka shirarka Waalidka / Macallinka
Waalidiintu waa inay la xiriiraan macallinka ku habboon markay su'aalo ama walaac soo baxaan.
Waajibaadka Shaqaalaha Dugsiga
Maamulayaashu waxay mas'uul ka yihiin hubinta hirgelinta waxa uu dugsigu ka aaminsan yahay, nidaamyada, iyo ku dhaqanka qiimeynta iyo warbixinta wax ku oolka ah.
Macallimiintu waxay mas'uul ka yihiin inay si wax ku ool ah u hirgeliyaan qiimeynta fasalka oo ku saleysan heerarka iyo inay ku dabaqaan mabaadi'da qiimeynta wax ku oolka ah iyo ku-soo-sheegidda iyadoo la adeegsanayo go'aan xirfadeed. Macallimiintu waxay sii wadi doonaan buugga fasalka oo toddobaadle la cusbooneysiiyaa. Macallimiintu waxay ku dhejin doonaan cusbooneysi toddobaadle ah Xarunta Fariinta (ama Kalandarka) Skyward.
La-taliyayaashu waxay diyaar u yihiin la-talin tacliimeed iyo mid aqooneed labadaba, waxaana loo heli doonaa inay ka caawiyaan ardayda, waalidiinta, iyo macallimiinta xiriirka isgaarsiinta horumarka tacliinta. La taliyayaashu waxay kugula talin doonaan adeegyada faragalinta sida ugu haboon.
Barayaashu waa xirfadlayaal aad u tababaran oo aan kaliya khabiiro ku ahayn waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxa ay barayaan laakiin sidoo kale go'aaminaya heerka fahamka arday kasta iyo gaaritaanka heerarka gaarka ah ee koorsada. Macallinka shaqadiisu waa inuu adeegsado caddeyn marka uu meelaynayo darajooyinka. In kasta oo dugsigeenu adeegsado qaab 80/20 (80% soo koobid ah, 20% qaabeyn ah) si loo xisaabiyo fasalka ugu dambeeya, macallimiintu waxay xaq u leeyihiin inay u adeegsadaan go'aankooda xirfadeed inay ku beddelaan fasalka ardayga illaa iyo inta ay jirto caddeyn cad.
Daacadnimo la’aanta Tacliinta
Ficil kasta oo ardaygu ku siinayo ama ugu adeegsanayo macluumaad qaab bixinaya ka-tarjumid aan sax ahayn oo ah barasho iyo faa'iido aan caddaalad ahayn. Ardayda muujineysa daacad-darrada tacliimeed waxaa loo diri doonaa la-taliyayaal iyo ama maamul iyo cawaaqib ku saleysan siyaasadda edbinta ayaa ka dhalan doonta. Arday kasta oo ay ku dhacdo sharafdarro xagga waxbarashada ah waxaa la siin doonaa fursad kale oo uu ku muujiyo barashadiisa ciqaab tacliimeed la'aan.
Tusaalooyinka waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn:
Qaadashada ama qaybinta sawirrada qiimeynta (shaashadaha shaashadda ayaa lagu daray)
Nuqulka shaqooyinka arday kale
Qaadashada nuqul ka mid ah qiimaynta qaybtayada qolka iyada oo aan macallin fasax laga haysan
Kala hadalka jawaabaha ama su'aalaha ku saabsan qiimeynta ardayda aan imtixaanka galin (e-maylka, qoraalka, warbaahinta bulshada ama nooc kasta oo isgaarsiin ah)
Xatooyo - Xatooyo iyo inaadan soo qaadin waxyaabo aan adigu iska lahayn oo aad magacaaga u dhigto sidii inaad tahay qoraha asalka ah
Adeegsiga agabyada / aaladaha macallinka ma uusan oggolaan inta qiimeynta lagu jiro (waxaa ku jiri kara: qoraalada, khariidadaha, qoraalka, taleefanka, kombiyuutarka) xitaa haddii isticmaalka aaladda / aaladda aysan ku xirneyn qiimeynta aad qaadaneyso (Markaad shaki ka qabtid weydii macalinka. )
Qiimeynta Dugsiga Sare ee Stillwater ee Waxbarashada
Ujeedada qiimeynta ayaa ah in loogu gudbiyo macluumaadka ku saabsan guulaha ardayda ka gaareen iskuulka waalidiinta iyo dadka kale, iyo sidoo kale in la siiyo macluumaad ardayda si ay isku qiimeeyaan.
Tababbarka qiimeynta ee SAHS wuxuu:
Si sax ah oo cad uga tarjumaya waxa ay ardaydu ogyihiin oo ay sameyn karaan.
Noqo mid cadaalad ah oo ku saleysan caddeyn.
Inuu si cad ugu xirnaado heerarka degmada iyo gobolka.
Ku noqo mid waqtigiisa ku habboon kuna dhiirrigeliso barashada adoo u maraya jawaab celin joogto ah.
Noqo mid joogto ah inta lagu jiro dugsiga, heerarka fasalada, iyo waaxaha.
In la kobciyo wada xiriirka ka dhexeeya guriga iyo dugsiga si looga caawiyo dhammaan ardayda inay gaaraan awooddooda waxbarasho buuxda.
Darajooyinka waxaa loo qaabeeyey inay ka tarjumayaan heerka uu gaarsiisan yahay heerka waxbarasho ee ardayga.
Darajooyinku waxay la xiriiraan waxay ardaydu yaqaanaan oo ay sameyn karaan marka la eego heerarka koorsada Waxyaabaha aan aqoonta ahayn * waxay si cad gacan uga geystaan guusha tacliimeed ee ardayga, laakiin markii arrimahaas lagu mideeyo cabbirada hanashada tacliimeed, fasalka ugu dambeeya ayaa si qaldan uga sheekeyn kara waxa uu ardaygu gaadhay. Waxyaabaha aan aqoonta ahayn ayaa lagu soo wargelin karaa si gooni ah marka loo eego gaaritaanka tacliimeed, laakiin saameyn kuma yeelan doonto fasalka guud ee ardayga ee koorsada.
Macallimiintu waxay si dhakhso leh uga bixin doonaan jawaab celin ku saabsan shaqada ardayga.
Sababtoo ah dib udhaca darajaynta ayaa yareynaya waxtarka jawaab celinta, macallimiintu waxay ku laaban doonaan shaqada dhibcaha sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Syllabi, shuruudaha qiimeynta, iyo qiimeynta guud ee qeybaha koorsada ayaa caam ah.
In kasta oo kala duwanaanta qiimaynta qaabdhismeedka iyo farsamooyinka koorsada dhexdeeda ah ay tahay mid la aqbali karo lana dhiirrigelinayo, macallimiinta isla koorsada heerka fasalka ah ayaa ku dabaqi doona halbeegyada qiimeynta si isku mid ah.
Fasalada Semesterka waxaa lagu xisaabin doonaa iyadoo lagu saleynayo isku dhafka qiimeynta qaabeynta (sida shaqada guriga iyo su'aalaha) iyo qiimeyn guud (sida imtixaanada, mashaariicda iyo qoraalada).
Qiimaynta isugeynta ayaa meteleysa wax aan ka yarayn 80% ee fasalka koorsada ardayga iyo qiimeynta Foomka ayaa matali doonta in kabadan 20% ee fasalka ardayga.
Waaxyaha shaqsiyeed ayaa go'aamin doona qiimaynta lagu daray qorshaha qiimeynta ee koorso iyo koorsooyinka shaqsiyeed waxay u isticmaali doonaan boqolkiiba isku mid ah qayb kasta.
Qeybo dheeri ah oo aan miisaan laheyn ayaa loo isticmaali karaa si loogu gudbiyo waxqabadka ardayda kale, laakiin ma saameyn doonto fasalka guud.
Qiimaynta qaabeysan iyo mid kooban ayaa si cad loola jaan qaadi doonaa heerarka koorsada.
Sharaxaada shaqooyinka ee buuga elektaroonigga ah ee fasalka ayaa bixin doona macluumaad isku xira shaqooyinka iyo qiimeynta bartilmaameedyada waxbarashada. Buugga buundada ayaa u caddeyn doona qof kasta oo tixraaca.
Barashada ardaydu waa hawl socota.
Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dib uqaataan qiimeyn kasta oo qaabeysan oo aan si fiican loo baran. Ardaydu dib ayey uqaadan karaan qiimeynta qaab dhismeedka inta jeer ee lagama maarmaanka u ah inay fahmaan waxa ku jira, laakiin dib-u-qaadashada waxay u baahan tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la bixin qiimeynta guud. Macallimiintu waxay u badan tahay inay u baahan doonaan shaqo tababar dheeraad ah ka hor intaanay u oggolaan ardayga inuu dib u qaato qiimeynta qaab dhismeedka. Dib-u-qaadashada ma aha qiimeyn isku mid ah, laakiin waa qiimeyn ka duwan oo qiimeynaysa bartilmaameedyo isku mid ah iyo fikrado.
Dib-u-qaadashada qiimeynta guud waa mudnaan la siiyaa ardayda muujiyey hanashada dhammaan shaqooyinka guriga iyo qiimeynta qaabeynta ee horseedda qiimeynta guud. Macallimiintu waxay u baahan doonaan shaqo tababar dheeraad ah ka hor intaanay u oggolaan ardayga inuu dib u qaato qiimeyn guud. Ardaygu wuxuu u baahan doonaa inuu bilaabo hawsha dib-u-qaadista oo dhammaystirka dib-u-dhammaystirka ayaa la dhammaystiray ka hor qiimeynta guud ee soo socota.
Ma jiri doonaan dib-u-habeyn la oggol-yahay dhammaadka-simistarka Imtixaannada Dhammaadka ee sannadka dhammaadkiisa.
Ardayda ayaa ugu horreyn mas'uul ka ah waxbarashadooda. Dhammaan ardayda waa inay si firfircoon uga qaybqaataan fahamka nidaamka qiimeynta iyo soo gudbinta Dugsiga Sare ee Stillwater Area.
Ardayda waxaa laga filayaa inay adeegsadaan Schoology maalin kasta si ay ula socdaan horumarkooda tacliimeed, u aqoonsadaan xoogooda iyo daciifnimada mowduuc gaar ah ayna ka raadsadaan caawinaad dheeri ah macallimiinta sidii loogu baahdo.
Ardaydu waxay mas'uul ka yihiin inay la xiriiraan macallimiinta (macallimiinta) habboon marka su'aalo ama walaac soo baxaan. Ardaydu waxay ballan la dhigan karaan la-taliyahooda si ay uga caawiyaan tacliinta.
Masuuliyiintu waa inay kala hadlaan carruurta arrimaha tacliinta. Waxaa si xoogan loogu dhiirigelinayaa inay xaadiraan Habeenkii Dugsiga ee Ku Laabashada deyrta, hubi horumarka ardayda ee usbuuclaha Schoology, hubi farriimaha ku jira Schoology toddobaadlaha, iyo jadwalka iyo ka qaybgalka shirarka.
Masuuliyiintu waa inay la xiriiraan macallimiinta / macallimiinta ku habboon marka su'aalo ama walaac soo baxaan.
Maamulayaashu waxay mas'uul ka yihiin hubinta hirgelinta ujeedada Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare, mabaadi'da, iyo ku dhaqanka qiimeynta iyo warbixinta wax ku oolka ah.
Macallimiintu waxay mas'uul ka yihiin inay si wax ku ool ah u hirgeliyaan qiimeynta fasalka oo ku saleysan heerarka iyo inay ku dabaqaan mabaadi'da qiimeynta wax ku oolka ah iyo ku-soo-sheegidda iyadoo la adeegsanayo go'aan xirfadeed. Macallimiintu waxay sii wadi doonaan buugga fasalka oo si joogto ah loo cusbooneysiiyaa.
La-taliyayaashu waxay diyaar u yihiin la-talin tacliimeed iyo mid aqooneed labadaba, iyo inay ka caawiyaan ardayda, waalidiinta, iyo macallimiinta wada xiriirka horumarka tacliimeed. La taliyayaashu waxay kugula talin doonaan adeegyada faragalinta sida ugu haboon.
Barayaashu waa xirfadlayaal aad u tababaran oo khabiir ku ah labada maadooyinka ay barayaan iyo go'aaminta heerarka fahamka iyo guusha ardayda. Macallimiintu waxay xaq u leeyihiin inay adeegsadaan go'aankooda xirfadeed si ay wax uga beddelaan darajada ardayga illaa iyo inta ay jirto caddayn cad oo lagu taageerayo wax ka beddelka.
Daacad darrada Tacliinta waxaa lagu qeexaa ficil kasta oo ardaygu ku siinayo ama ugu adeegsanayo macluumaad qaab ku siinaya ka-tarjumid aan sax ahayn oo ah barashada iyo / ama siisa faa'iido aan caddaalad ahayn. Ardayda ku hawlan daacad-darrada tacliimeed waxay la kulmi doonaan cawaaqib waafaqsan nidaamka anshaxa.
Qiimeynta qaab dhismeedka waxaa lagu qeexaa Qiimaynta barashada ama ku dhaqanka tacliinta. Waa shaqo la qabtay markii ardaygu weli baranayo maadada waxaana loogu talagalay inay jihayso ardayda iyo macallimiinta labadaba.
Qiimaynta qaab-dhismeedku waxay ka caawisaa ardayda inay la socdaan horumarkooda xagga hanashada bartilmaameedyada waxbarashada, waxayna ka caawiyaan macallimiinta inay aqoonsadaan meelaha ay ardaydu ugu baahan yihiin tababar dheeraad ah.
Tusaalooyinka waxaa ka mid noqon kara shaqada guriga, waraaqaha shaqada, fiirsashada, naqshadaha adag, su'aalaha, sheybaarada, jeegaga buugaagta, iwm.
Qiimeyn Kooban waxaa lagu qeexay Qiimaynta Barashada. Kuwani waa qiimeyn lagu cabbirayo fahamka ardayda ee koox bartilmaameed waxbarasho ah iyo / ama natiijooyinka muhiimka ah ee bartayaasha.
Qiimaynta isugeynta waxay raacdaa shaqada tababarka (shaqada guriga, qiimeynta qaabdhismeedka, iyo tilmaamaha).
Tusaalooyinka waxaa ka mid noqon kara imtixaanno, qormooyin, bandhigyo, ama mashruucyo.
Waxyaabaha aan Aqoonta laheyn
Waxyaabaha aan aqoonta ahayn waa dhinacyada waxqabadka ardayga ee aan si cad ugu xirnayn heerarka tacliimeed.
Arrimahan waxaa ka mid ah dabeecadaha (sida waqtiyada shaqada, aragtida, kaqeybgalka, dadaalka), sharafdarrada tacliimeed, xaadiritaanka, iyo shaqada guriga oo salka ku haysa dhammaystirka.
Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay diidaan qiimeynta ilmahooda. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan diidmada qiimeynta gobolka, booqo websaydhka waaxda waxbarashada ee minnesota .
inaad diido imtixaanka gobolka oo dhan sanad dugsiyeedka 2020-2021, fadlan buuxi foomka hoose kuna soo celi maamulaha ilmahaaga taariikhaha soo socda: Diidmada ACCESS ee Imtixaanku waa 2/5/21. Diidmada MCA / MTAS oo ku eg 2/12/21 .
Hagaha Waalidka / Masuulka iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Imtixaanka Gobolka oo dhan
Guía y negación de permiso para padres / tutores acerca de la participación del estudiante en las pruebas estatales - español
Xagaha Waalidka / masuulka iyo diidmada ka qayb qaadashada ardeyda ee imtixaanka gobalada - somali
Cov Lus Qhia Rau Niam Txiv / Tus Neeg Saib Xyuas Menyuam iyo Kev Tsis Kam Cia Tus Menyuam Kawm Ntawv Mus Koom Qhov Ntsuas Thoob Plaws Hauv Lub Xeev - hmong
األمور أولياء / اآلباء دليل و رفض مشاركة الطالب في الختبار ة مستوى عل - Carabi